Hanisha Solomon’s Geerarsa [New Oromo Music]
Posted: Caamsaa/May 5, 2017 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (6)
Credits/Tags: Geerarsa, Hanisha Solomon, Oromo Music, Oromo Protests
Gerarsa addee Ilfuu keenya malee geersa dubartii akas nama kakaasee nama boochisu dhagaye hinbeeku.
Hedduu galatoomi Hanisha keenya! Waaqayyo si haa ebbisu!
Lafti bari’uu geesse hin dukanoofti jechaafi malee bilisoomuun waan hinoolle.
Gadaa.com isinillee galatoomaa!
Hassan Abbaa Tiibbaa Reply
Hanisha hedduu galatoomi. Akkas kunoo. Waan ajaa’ibaati. Otuu waan akkasii jiruu gadbahuuf turuun kee gaaffii guddoo
dha. Haa ta’u malee yeroo dararamni ummata Oromoo garmalee jabaatee itti fufee jiruu fi Oromoon bilisummaa isaatiif
qabsoo hadhooftuu geggeessaa jiru keessatti haala kana fakkaattuun as bahuun kee immoo isa dabre qofaa irratti walkomachuu otoo hintaane imimmaan geerarsi kun namatti fidu of irraa haxaawwachaa fuulduratti qabsoo diina irratti goonu finiisuutu nurra egama. Diinni keenya yeroo dha gara yerootti hojii manaa adda addaa nuu kennee afanfaajjii nutti
ummuuf tattaafata. Fakkeenyaaf kan akka Finfinnee irraa dantaa addaa Oromoon argachuu qabaatu jechuun labsii baasuu fi kkf. Gowwoomsaa halagaa yeroon itti dabre akkasii kana irraa of eguun hedduu barbaachisaa dha. Geerarsi kunis dantaaf jecha akkasumas waan xixiqqoon dagamnee akka ergamtuu diinaa hintaane waan nu akeekkachiisuuf Oromoon waan biraa dhiisee
kaayyoo bilisummaa cimsuun walfaana ka’uu qaba. Haala amma keessa jirru yoo sirriitti xiinxalle bilisummaaf qabsoo gochuu malee kan nu baasu hinjiru. Kanaaf diina ergamee Oromoo gidduu lohuu fedhu of irraa egaa qabsoo keenya haa jabeessinu.
Hanisha irra deebiin galatni kee bilisummaa haa ta’u. Jabaadhu!
Ergaa Hin Dulloomne.
Walleen Kun goonkumaa kan dulloomu miti . Waggootii dheeraa booda ille yoo dhaggeeffatame , mi’aan isaa hin irratu .
Dhalootni bori dhalatan illee akka dhaggeeffatan shakkii hin qabu . Dhalootni bor dhalatanis itti boo’aaru . Seenaa wallee kanaas gaafatanii baruudhaafis ni carraaqu .
Barreess/ituu / aa wallee kanaa fi Wallistuu keenyaan baga gammaddan jechuun fedha .
Jiruu Dhalootatti Darbaa Jiraatu waan Gumaachitaniif . Baga Milkooftan .
Hanishaa Solomon jechoota an ittiin ibsee fixu hin qabu!!! Hojiin ishee Fi quuqamni isheen lammii isheef qabdu hedduu kan nama boonsudha.
Mihret Ittafaa Reply
Walleen Kun goonkumaa kann dulloomu miti . Waggootii dheeraa booda ille yoo dhaggeeffatame , mi’aan isaa hin irratu . Ergaan isaa nama keessatti hafee kan jiraatuu dha .
Dhalootni bori dhalatan illee akka dhaggeeffatan shakkii hin qabu . Dhalootni bor dhalatanis itti boo’aaru . Seenaa isaanii akka qorataniif hedduu isaan dammaqsa . Seenaa wallee kanaas gaafatanii baruudhaafis ni carraaqu . Kanaatiifan jedhe ; Bulee ooluu irra darbee , kudhaama seenaa ta’uun kan yaadatamaa hafuu dha .
Jiruu Dhalootatti Darbaa Jiraatu waan Gumaachitaniif . Baga Milkooftan !!
Artistootni Oromoo bara hamaa fi dararamni Lammii keessanitti jigu , baayyinaan , lammii keessaanii waliin dhaabbattanii ergaa dabarsitaniittu . Welliistoota Oromoo kan dantaan isaan mo’eef illee dhaamsaa fi gorsa hedduu laattaniif .
Hadha-qabeeyyummaan keessan fakkeenya ta’ee kann jiraatuu dha . Ulfaadha . !!
Walaloo akkanatti cimaa baroota as aanan kana argee hin beeku. Hanisha jechoota ittiin si faarsutu natti qaalawa.